ကျေးလက်သားလေး: တောရွာ ထမင်းနဲပွဲ
တစ်နှစ်မှာ (၁၂) တစ်ဆယ့်နှစ်လ ရှိတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမည်ထင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ် ပြက္ခဒိန် နှင့် မြန်မာ ပြက္ခဒိန် မတူ ပုံကိုလည်း မြန်မာလူမျိုးအားလုံးသိရှိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်...။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၂ လရှိသော်လည်း ဥတုအားဖြင့် သုံးမျိုး ပိုင်းခြားထားပါသည်။ နွေရာသီ ၊ မိုးရာသီ နှင့် ဆောင်းရာသီလို့ ဥတုတစ်ခုကို လေးလနဲ့ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတာကို ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ် ဒုတိယတန်း မြန်မာဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ သင်ကြားပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်..။
ရာသီစက်ဝန်းဟာ အမြဲမပြတ် ပြောင်းလဲ နေလိုက်တာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အသက် ၂၅ ကျော်လို့ ၃၀ အတွင်းမှာ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လို့နေပါပြီ..။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အမေ့အိမ်က အကြောင်းလေးတွေကို အခုချိန်ထိ နှလုံးသားမှာထွင်းထုထားသလို အမာရွတ်အဖြစ်ကျန်ရှိပြီး အမှတ်တရ ရှိနေစဲပါ..။အခု လရာသီကား နွေကိုမောင်းထုတ် မိုးကိုဖြတ်သန်း ဆောင်းသရုပ်ကို ပေါ်လွင်စေခဲ့တာ သုံးလကျော် လို့ တပိုတွဲလတောင်ရောက်ရှိလို့နေ
ပါပြီ.. ။ တပိုတွဲလဆိုတာ အေးလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲရှိပါသေးတယ် ...။ ပြာသိုလ်လကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ
ီလေ...။ လက်ပံပွင့်နီနီရဲရဲလေးတွေကို မြင်လိုက်တာနဲ့ အလိုလို တပိုတွဲဆိုတဲ့ သရုပ်ကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ကလေးတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာလည်းလက်ပံပွင့်ချိန်ခွေးရူးချိန်လို့အော်နေကြတဲ့အချိန်ပေါ့...။အဲဒီအချိန်မှာခွေးတွေတကယ်ကိုရူးပါတယ် .... အဲဒီအတွက် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေ ကို မိဘများကအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့အမြဲတမ်းဆုံးမတဲ့ ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တပိုတွဲ လဆန်းပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ရွာလုံး သိထားကြတာကသူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲနေတာကတပိုတွဲလပြည့် နေ့မှာထမင်းနဲထိုးကြရမယ်ဆိုတာပါပဲ။အိမ်တိုင်းနီးပါးထမင်းနဲထိုးရန်အတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုကြိုတင်စုဆောင်းထားခြင်းပါပဲ...။ ကောက်ညှင်းဆန် ၊ အုန်းသီး ၊ မြေပဲ ၊ နှမ်းစတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းထားကြပါတယ်...။ ဒီလိုနဲ့ အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ တပိုတွဲလပြည့်နေ့ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။မနက်စောစောမှာတော့ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့မြောက်ဘက်ကရွာတွေမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက အုန်းမောင်း (ကုလားတက် ၊ ရွာအခေါ် တုန်း)ခေါက်သြဲံကားပြီဆိုတာနဲ့တစ်ရွာလုံးထကြပါတယ်(မနက် ၃နာရီ ၃၀ မှာ တုန်းခေါက်တာပါ ပုံမှန်ပါပဲ)။ ကျွန်တော်အဖွားရယ် ၊ အမေရယ် ၊ ကျွန်တော့်ဦးလေး စိန်စိန်(ကိုတက်စိန်) ၊ ကျွန်တော့် ဘလေး ရယ် ၊ အစ်မ၀မ်းကွဲ တစ်ယောက်ရယ် ထပြီး လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်...။ ကျွန်တော်သည်လည်း ကလေးတို့ ဘာသာ ဘာဝ အိပ်ရေး အရမ်းစုံမက်ပါတယ်... ညက အိပ်လိုက်ရင် မနက်လင်းမှ နိုးတာပါ (ဆင်အော်လို့မနိုးဆိုတဲ့ )အထဲမှာ ကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်...။ တစ်ခြားရက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ အိပ်ရေး စုံမက်ပါစေ တပိုတွဲလပြည့် ထမင်းနဲထိုးတဲ့နေ့မှာတော့ အမြဲတမ်း အစောနိုးနေလေ့ရှိပါတယ်...။ ပဲခူးဆား ခတ်တိုင်းငန် ဆိုသလိုပါပဲ ကျွန်တော်သည်လည်း ငန်ရုံသက်သက်မျှသာဖြစ်ပါသည် .... (အဲဒီပုံခိုင်းကတော့ ဘာမှ အကူအညီမရပဲ ၀င်ရောက်ရှုပ်ခြင်းကို ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်)။
ပဲခူးဆားလို့အပြောခံရမှာ ကြောက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့ လူကြီးတွေ ထမင်းနဲ ထိုးတဲ့အနားမှာမီးခွက်ပြတာလိုလို၊မီးထိုးပေးတာလိုလို(မီးထိုးတယ်ဆိုတာမီးတောက်အောင်မီးဖိုထဲမှာထင်းထိုးပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်) နဲ့ဝင်ရောက်နေရာ ယူပြတတ်ပါသည်...(အမှန်ကတော့ဖားခြင်းဖြစ်ပါသည်) ။ ကျွန်တော့် ဦးလေးနှစ်ယောက်ကတော့ ထမင်းနဲကောင်းကောင်းရရန်အတွက် ချွေးတစ်လုံးလုံးနှင့် ထိုးလိုက်ဟ ကြိတ်လိုက်ဟ နဲ့ အော်ပြီး ယောင်းမ တစ်လက်စီနဲ့ ကြိတ်နယ်နေကြပါသည်။ ကျွန်တော်အမေက စားဖိုမှူးပေါ့ မြည်းကြည့်လိုက် နဲနဲမာတယ်ဆိုရင်ရေထည့်လိုက်၊ဆားလေးထည့်လိုက်၊ ဆီလေးထည့်လိုက်ပေါ့...။နောက်ဆုံးမှာတော့ထမင်းနဲထဲကိုအုန်းသီးကြော်တွေဖြူး၊နှမ်းထောင်းဖြူး၊ကြက်သွန်ဆီသတ်ပြီးသားထည့်(ကြက်သွန်ကြော်ကိုဆိုလိုသည်) ၊ မြေပဲထည့်ပြီး အဆုံးသတ် ထမင်းနဲကောင်းကောင်း တစ်အိုး ရရှိလို့သွားပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဖွားကအမြဲပြောဖူးပါတယ် တပိုတွဲလပြည့်နေ့ ဟာ" သြ၀ါဒ ပါတိမောက် အခါတော်နေ့" ဖြစ်တယ်... အဲဒီနေ့ကိုကြည်ညိုလေးစားသောအားဖြင့်ထမင်းနဲထိုးပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တွေကိုကပ်လှူပူဇော်တာဖြစ်တယ်လို့
ပြောပါတယ်...နောက်ပြီး အဲဒီနေ့ဟာ အရမ်းအေးတဲ့အတွက် မြတ်စွာဘုရားက လက်တော်ကိုမီးကင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်..
အဲဒီအတွက် အဖွားက တပိုတွဲလထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ သနပ်ခါး သားတွေကို ဓါးနဲ့ခွဲပြီး နေပူလှမ်းခိုင်း ၊ကျွန်တော်
တို့ရွာရဲ့မြောက်ဘက်က ချောင်းထဲမှာ ငွေရောင်ထနေတဲ့ ဖြူလွလွ သဲပွင့်လေးတွေကိုလည်း ကြိုပြီး ကျုံးခိုင်းထားပါသေးတယ်။
တပိုတွဲလဆန်း၁၄ရက်နေ့ညနေနေ၀င်မိုးချုပ်အချိန်ကစပြီးအဖွားကပြင်ဆင်ပါတော့တယ်...အိမ်ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်မန်ကျည်းပင်အောက်မှာသေချာသန့်ရှင်းနေအောင်လှဲကျင်းနောက်ပြီးကြိုပြီးကျုံးထားတဲ့ဖြူလွလွသဲတွေကိုခင်းသဲတွေရဲ့အပေါ်မှာဓါးနဲ့ခြမ်းပြီးနေပူလှမ်းထားတဲ့သနပ်ခါးအခြမ်းလေးတွေကိုသေချာစီရီသပ်ရပ်နေအောင်နှစ်ချောင်းစီကန့်လန့်တင်တင်သွားပါတယ်လူကြီးခါးတစ်ဝက်လောက်မြင့်ပါတယ် ... ပြင်ဆင်ထားပြီးသားလဲပြိုမသွားရအောင် စောင်းနဲ့အုပ်ထားပါတယ်.(စောင်းဆိုလိုသည်မှာဝါးကိုခြမ်းပြီးရပ်ထားသော အုပ်စောင်းအကြီးစားကိုဆိုလိုသည်)..။မနက်အာရုဏ်တက်ချိန်ဝေတီဝေလင်းအချိန်မှာစပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသနပ်ခါးမီးနဲ့ပူဇော်ပါတော့တယ်..။ သနပ်ခါးသားကိုမီးရှိူ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်အိမ်လုံးပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာလည်းမွှေးပျံ့ကြိုင်သင်းနေပါတော့တယ်...။
အားလုံးပြီးစီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ ရရှိထားတဲ့ ထမင်းနဲပွဲတွေကိုပြင်ဆင်ပြီး ကျွန်တော့် အမေက ရော့ သားကြီးမင်းက ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားလှူ၊ သားငယ် မင်းကတော့ မင်းတို့စာသင်ခဲ့တဲ့ မင်းတို့ဦးဇင်းကျောင်းနဲ့ ဘယ်ကျောင်းကိုသွား ၊ ကျွန်တော်အဖေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုသွားပြီး လှူဒါန်းခိုင်းပါတယ်...။ အဲဒီပုံရိပ်တွေကို ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ မေ့မည်မဟုတ်တော့ပါ...။
အဲဒီ တပိုတွဲလပြည့်ရဲ့ ထမင်းနဲ့ထိုးပွဲနဲ့ ထမင်းနဲလှူတာရယ်၊ မြတ်စွာဘုရားကို သနပ်ခါးမီး ပူဇော်တာတွေကိုတော့ ကျွန်တော်ဘယ်ဘ၀ ၊ ဘယ်တိုင်းပြည် ၊ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ ကိုပဲ ရောက်ရောက် ကျွန်တော်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမာရွတ်တစ်ခုလိုထင်ကျန်နေမှာကတော့ အမြဲအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်....။ (ကျွန်တော်ရေးတတ်လို့ ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ ၀န်ခံပါသည်)အလွမ်းပြေရေးထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်...။အမှားကိုအမှန်ပြင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းနဲပွဲရိုးရာအကြောင်းလေးကိုဖတ်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံး အသိနဲ့ သတိကပ်နိုင်ကြပါစေ....။ ( ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည်)
Posted by yar zar at 12:53 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကွမ်းတောင်ကိုင် နှင့် အညာအလှူ(၇)
ရိုးလွန်း လျှင် အ
ဆင်ခြေပေး တဲ့ ပါးစပ်
အညာက ဖာ နဲ့ ဖုတ်
သရက်ပင် ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
အညာဓလေ့ မှ ကလေးဘ၀များ
သမက် နဲ့ ယောက်ခမ (ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် မဟုတ်ပါ)
မွေးနေ့ အမှတ်တရ ( အသိကို သတိနဲ့ ကပ်နိုင်ပါစေ)